Hirar qabow | Saadaasha Shabakadda
Dhinaca kale ee hirarka kuleylka waxaan helnay ah hirarka qabow taas oo waliba khatarteeda leh. Dabeecadda mararka qaar waxay noo qaaddaa xad-dhaaf, laakiin faa iidada ayaa ah in guud ahaan horay loo sii ogeysiiyo si aan uga hortagno xaaladaha halista ah.
Sidaa darteed meeshan, waxaad ka heli doontaa talooyin iyo macluumaad la xiriira qabow qabow. Waxaas oo dhan waxay naga caawinayaan inaan si fiican u fahamno cimilada na saameyneysa mararka qaarna wax yar naga tuura.
Mawjadaha qabow ee Siberia ee ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah Yurub ayaa ka tagay meelo badan oo ku yaal ...
Gudaha Isbaanishka waxaan ku soo aragnay mowjad qabow oo asal ahaan ka soo jeeda Sibiriya oo ka jirta jasiiradda oo dhan, marka laga reebo jasiiradaha Canary….
Mawjadaha qabow ee Siberia ee aan la kulanno wuxuu gaarayaa meeshii ugu sarreysay Spain oo dhan. Gudaha…
Hirarka qabow ee aan xilligan ka dareemeyno Spain ayaa barafka uga tagaya heerar aad u hooseeya iyo ...
Miyaynu ognahay waxa qabow qabow runti yahay? Hadda, marka ficil ahaan dhammaan Isbaanishku ay la kulmaan xaalad saadaasha hawada ...
Waxay umuuqatay inaysan imaan doonin, laakiin jiilaalku waa joogaa. Ama halkii, maalmihii ugu adkaa ee ...
by Sergio Gallego samee 6 sano .
Maalmahan, Spain waxaa soo maray duufaantii ugu horreysay ee sanadka oo leh heerkul aad u hooseeya, gaar ahaan ...
by David melguizo samee 8 sano .
Qabowgu wuxuu ku soo noqdaa inuu nagu soo booqdo waana ku habboon tahay in la xusuusto in marar badan aan ka cabanno ku-xigeen. Wixii loogu talagalay…